दीपाश्रीको फेसबुक ह्याक गर्ने १४ वर्षे बालक पक्राउ, फेसबुक फेरि पाउँदा खुशी हुँदै यसो भनिन् Canada Nepal
Apr 13 2021 | २०७७, चैत्र ३१गते
२०७७, चैत्र ३१गते
मेयर तामाङको श्वेतालाई चुनौती– माझी बस्तीमै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग
वैशाख ११ गते धरहरा उद्घाटन गर्ने तयारी
यो हो विश्वकै आकर्षण र महँगो ह्याण्ड ब्याग, जसको मूल्य ८ अर्ब पर्छ !
म्यानमार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७ सय नाघ्यो, ३१ सय बढी थुनामा
पेट दुखेको छ ? यी कुराहरु पानीसँग मिसाएर पिउनुहोस्
सर्वोच्च अदातलको न्यायाधीश बन्न सुवेदीको योग्यता पुग्ने सर्वोच्चको फैसला
अभिनेत्री सोमीसँग लामो समयसम्म प्रेमसम्बन्धमा रहेका थिए सलमान, उनी भन्छिन् - सलमानले मलाई धोका दिए
इरानमा परमाणु केन्द्रमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण
दीपाश्रीको फेसबुक ह्याक गर्ने १४ वर्षे बालक पक्राउ, फेसबुक फेरि पाउँदा खुशी हुँदै यसो भनिन्
क्यानाडानेपाल चैत्र २४ २०७७
काठमाडौं - अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाको फेसबुक ह्याक गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका–५ बस्ने १४ वर्षीय बालक रहेका छन् ।
फेसबुक ह्याक गरी रकम माग गरेको अभियोगमा बालकलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय साईबर ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको सहयोगमा सोमबार पक्राउ गरेको हो।
गएको हप्ता दीपकराज गिरीले दीपाश्रीसहित कलाकार सरोज खनालको फेसबुक ह्याक भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका थिए । उनले ह्याकरले चलचित्रकर्मीको फेसबुक ह्याक गर्दै पैसा माग्न थालेको पनि बताएका थिए ।
आफ्नो फेसबुक ह्याक गर्ने पक्राउ परेपछि दीपाश्रीले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेखेकी छिन् । उनले आफुले फेसबुक पाएको बताउँदै पठाईएका गलत म्यासेजहरूले कसैलाई केहि अफ्ठ्यारो पर्न गएको भएमा माफ़ी मागेकी छिन् ।
उनले भनेकी छिन् - 'गत हप्ताको बिहीबार March 25 मा मेरो लगायत सरोज दाई,शुसील जी को Facebook Account Hack गरेर Hackerले हाम्रो Messengerबाट घेरै जना संग Chat गर्दै पैसा मागेको रहेछ। Cyber Bureau को मद्दतले आज १२ दिन पछि यो Facebook Account फेरी Retrieve हुन सफल भएको छ। Hacker द्वारा पठाईएका गलत Messageहरूले यदि कसैलाई केहि अफ्ठ्यारो पर्न गएको भएमा हामी यहि post मार्फ़त माफ़ी माग्न चाहन्छौ '
चैत्र २४, २०७७ मंगलवार १८:५४:२४ बजे : प्रकाशित
# दीपाश्री निराैला
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी १४ मा निर्माणाधीन माझी बस्तीका विषयलाई लिएर मेयर अमानसिंह तामाङ र नायिका श्वेता खड्काबीच तिक्तता देखिएको छ ।
पछिल्लो समय चर्चामा रहेको माझी बस्ती निर्माणलाई लिएर यसका परिकल्पनाकार श्वेता खड्का र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच तिक्तता देखिएको हो ।
२०७४ जेठ १५ श्वेताश्री फाउण्डेसनको अगुवाइमा माझी बस्तीका ५३ घर निर्माणको सुरुवात गरिएको थियो । तर, हालसम्म पनि निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सो बस्ती निर्माणका क्रममा स्थानीय माझीहरुलाई ऋण बोकाइएको र संकलन रकमका सम्बन्धमा पनि पारदर्शीता नपनाइएपछि श्वेताश्री फाउन्डेशन र स्थानीय तहबीच मनमुटाव देखिएको हो ।
बस्ती निर्माणमा संकलन रकम र खर्चको विवरण पारदर्शीताबारे प्रश्न उब्जिएपछि स्पष्ट पार्न श्वेतामाथि दबाब बढेको छ । अहिले बस्ती निर्माणमा श्वेताले नेतृत्व लिएको देखिँदैन ।
हाल बस्ती निर्माणको नेतृत्व स्थानीय पूर्वाधारले गरिरहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका मेयर अमानसिंह तामाङले जानकारी दिए । मेयर तामाङकाअनुसार माझी बस्ती निर्माणको भिजन श्वेताको हो । तर, अहिले श्वेताले आफूले बताएजस्तो माझी बस्ती निर्माणको जिम्मेवारीमा नरहेको मेयर तामाङ बताउँछन् । श्वेताले केही प्राविधिक खटाएको बताए पनि त्यस्तो आफूले नपाएको मेयर तामाङ भन्छन् ।
माझीलाई ऋण बोकाएर झिकिएको पैसा, संकलन रकम र यसको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न मेयर तामाङले श्वेतालाई चुनौती दिएका छन् । निर्माणाधीन माझी बस्तीमै सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न श्वेतालाई मेयर तामाङले चुनौती दिएका हुन् ।
यता श्वेता पत्रकार सम्मेलन वा मिडियामार्फत यस विषयमा बहस गर्न रुचाएकी छैनन् । उनी जतिसक्दो चाँडो माझी बस्ती निर्माण सम्पन्न गरेर कामले देखाउने बताउँछन् ।
माझी बस्ती निर्माणका क्रममा संकलन रकम पारदर्शी रहेको दाबी गरेकी श्वेताले कसैलाई शंका लागेमा अडिट रिपोर्ट हेर्न सुझाव दिन्छिन् । भिडिओमा बोल्न नचाहेकी श्वेताले आफूले पारदर्शी रुपमा काम गरेको दाबी गरेकी छन् । तर, पारदर्शी रुपमा काम गरेको हो भने सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत नै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न मेयर तामाङ बताउँछन् ।
बस्ती निर्माणका क्रममा लागेको ऋण तिर्न स्थानीय माझी समुदायलाई धौ धौ परेका बेला श्वेतामाथि खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न स्थानीय तहले दबाब सृजना गरेको हो ।
श्वेता फाउन्डेशनले खर्चको विवरण स्पष्ट राखेको देखिँदैन । फाउन्डेशनले उपलब्ध गराएको खर्च विवरणमा स्पष्ट नदेखिएको हो । माझी बस्ती निर्माणका लागि रकम संकलन गर्न भन्दै श्वेताले पाँचतारे होटेल अन्नपूर्णमा गरेको ‘कान्छी म्युजिकल नाइट’मा जम्मा एक हजार सात सय १० रुपैयाँ संकलन भएको विवरणमा देखिन्छ ।
पाँचतारे होटेलमा गरिएको भव्य कार्यक्रममा संकलन भएको भनिएको सो रकमबारे जिज्ञासा राख्दा उक्त रकम ‘सहयोग बक्स’को रहेको श्वेताले बताइन् । सो कार्यक्रममा आर्थिकभन्दा बढी भौतिक सामग्री संकलन भएको श्वेताले बताए पनि फाउन्डेशनले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख गरेको भेटिएन ।
शंकास्पद देखिएपछि मेयर तामाङले माझी बस्तीमै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेर खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न श्वेतालाई चुनौती दिएका हुन् । खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका मेयर तामाङ माझी बस्ती भने नजाने गरेको श्वेताको आरोपलाई खण्डन गरेका छन् ।
राजनीतिक कार्यक्रम हुँदा मात्रै मेयर तामाङ माझी बस्ती आउने गरेको श्वेताको आरोपलाई मेयरले खण्डन गरेका हुन् । उनी आफू माझी बस्तीमा गइरहने गरेको बताउँछन् ।
माझी बस्ती निर्माण विषयलाई लिएर मेयर तामाङ र श्वेता खड्काबीच देखिएको विवादभित्र कमिकमजोरी रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । तर, उनीहरु एकअर्काबीच राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबी गर्छन् ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार २२:०६:५७ बजे : प्रकाशित
# श्वेता खड्का
# माझी बस्ती
रचना रिमाल र भूषण खतिवडाको ‘ह्याप्पी न्यू ईयर’
काठमाडौं । गायिका रचना रिमाल र गायक भूषण खतिवडाले नयाँ वर्ष लक्षित आफ्ना दर्शक र स्रोतामाझ नयाँ म्युजिक भिडिओ ल्याएका छन् ।
नयाँ वर्ष २०७८ नजिकिँदै गर्दा उनीहरुको स्वर रहेको ’ह्याप्पी न्यू ईयर’ म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त गीतमा बसन्त लम्सालको शब्द, संगीत र सुरज श्रेष्ठको एरेन्ज रहेको छ ।
निकेश खड्काको निर्देशन रहेको सो गीतको भिडिओमा लुस बराइली, रन्जित पौडेल, अनामिका बाराकोटी, पबित्रा चौहान र रेशम बुढाथोकीको अभिनय रहेको छ ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १६:४९:२७ बजे : प्रकाशित
# रचना रिमाल
# ‘ह्याप्पी न्यू ईयर’
कमेडी फिल्म 'चुरीफुरी' को पोष्टर सार्वजनिक, असोज १ रिलिज हुने
काठमाडौं - फिल्म 'चुरीफुरी'को पहिलो पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । ऋषिराज आचार्यको निर्देशनमा बन्ने फिल्म चुरीफुरीको सार्वजनिक पोष्टरमा सबै कलाकारहरु देखिएका छन् ।
पोष्टरमा पूजा पन्त, सोना बज्राचार्य, रिन्जिन गुरुङ, रविन्द्र झा, शिशिर भण्डारी, दीपक आचार्य लागयतका कलाकारहरु देखिएका छन् ।
कमेडी जनरामा निर्माण भएको यस फिल्म आगामी असोज १ गते रिलिज हुने पोष्टरमा जनाइएको छ । यसै फिल्ममार्फत पूजा पन्तले अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यु गर्दैछिन् ।
आरबी मुभिजको ब्यानरमा निर्माण भएको यस फिल्म कमेडी जनरामा बन्ने भएकाले दर्शकले रुचाउने अपेक्षा गरिएको छ । फिल्ममा रिना ढकाल र निर्देशक आचार्यले संयुक्त रुपमा लगानी रहेको छ ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार १२:२७:५७ बजे : प्रकाशित
सिल्क फेसनको वार्षिकोत्सवमा कोमलले गरिन् आफ्नै तारिफ
काठमाडौंको जमलस्थित मायालु भवनमा रहेको सिल्क फेसनले शनिवार आफ्नो सातौं बार्षिकोत्सव मनाएको छ । बार्षिकोत्सव समारोहमा राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा चर्चित गायिका एवं संचारकर्मी कोमल ओली प्रमूख अतिथीको रुपमा उपस्थित थिईन् ।
कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै ओलीले स्थापना कालदेखी नै आफु श्रृजना पोखरेलले संचालन गर्दै आएको सिल्क फेसनसँग जोडिएको बताईन् । 'म शुरुदेखी नै यो फेसन हाउससँग जोडिएकी छु । यहाँका हरेक कस्ट्युम फिट पाएकी छु । म यहाँका कस्ट्युम लगाउन पाउँदा भाग्यमानी ठानेकी छु', कोमलले भनिन् । ओलीले आफ्नो सुन्दरताको तारिफ आँफैले गरिन् । अन्य महिलाहरुलाई प्रेरणा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित उनको भनाई थियो, 'मैले आफुले आफुलाई निकै राम्री देख्छु । बिहानै ऐना हेरेर मुसुक्क हाँस्छु । वाह कोमल ओली तिमी कति राम्री छौ भन्छु', उनले थपिन्, 'आफैले आफैलाई प्रेम गरेन भने अरुलाई पनि प्रेम दिन सकिदैन । आँखाहरुलाई इर्ष्यालु नबनाउन आफैलाई हेरेर दंग पर्नुपर्छ' ।
नेपाली डिजाईनका कस्ट्युमहरु विकसित देशमा महिला तथा पुरुषहरुले लगाउन थालेको भन्दै ओलीले महिला उद्यमीहरुको सहभागिता र प्रयासले उक्त कुरा सम्भव रहेको बताईन् । 'अहिले महिलाहरुको सहभागितामा विदेशमा नेपालमा गरिएका डिजाईनका कस्ट्युमहरु निर्यात भईरहेको छ । यो उर्जाशिल कुरा हो र राष्ट्र निर्माणमा ठुलो योगदान हो । म हरेक महिला उद्यमीको साथमा छु । केहि पर्‍यो भने सिधै भन्नुहोला, म तपाईँकै प्रतिनिधी हुँ', कोमलले बताईन् ।
कार्यक्रममा सिल्क फेसनकी संचालक श्रृजना पोखरेलले विगत सात बर्षदेखी आफ्नो डिजाईनका कस्ट्युमहरु ग्राहकले मन पराएको बताईन् । नेपालका चर्चित सेलिब्रेटीहरुको लागि समेत डिजाईन गर्ने पोखरेलले सिल्क फेसनले अब भने पुरुषको कस्ट्युममा समेत काम गर्ने योजना भएको बताईन् ।
गायिका सुनिता दुलालले आफु सिल्क फेसनको पहिलो ब्राण्ड एम्बेसडर भएको सम्झना गरिन् । सिल्क फेसनद्वारा सम्मानित समेत भएकी उनले भनिन्, 'यहाँमा हरेक डिजाईन र गुणस्तर तारिफयोग्य छन् । आज यहिँ सम्मानित हुन पाउँदा खुशी लागेको छ' ।
कार्यक्रममा बिशिष्ट अतिथीको रुपमा बरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यकी पत्नी रमिला आचार्य थिइन् । गायिका सुनिता दुलाल, सौन्दर्यविद रश्मिला श्रेष्ठ, व्यावसायि सपना थापा, शिक्षाविद उर्मिला बस्नेत, समाजसेवी कल्पना क्षेत्री र फेसन व्यावसायि शैलजा अधिकारीलाई सातौं बार्षिकोत्सवको अवसरमा सम्मानित गरिएको थियो । कार्यक्रममा गायिका सहिमा श्रेष्ठ तथा मोडल खुश्बु खड्काको पनि उपस्थिती थियो ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार ०९:५२:४३ बजे : प्रकाशित
सलोन बस्नेत र शिशिर राणाको अभिनयमा फिल्म 'हामी तीन भाई' बन्ने
काठमाडौं - फिल्म 'हामी तीन भाइ' बन्ने भएको छ । मधुसूदन भट्टराईको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म 'हामी तीन भाई'मा सलोन बस्नेत र शिशिर राणा लागायतका कलाकारको अभिनय रहने भएको छ । यस फिल्मलाई साजित महतले निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
प्रसिद्धि सिने आर्टको ब्यानरमा निर्माण हुने यस फिल्म स्व शिव रेग्मीको लेखन तथा निर्देशनमा बनेको फिल्म होइन । डेढ दशक अगाडीको फिल्म हामी तीन भाइ मा राजेश हमाल ,नन्दिता केसी ,निखिल उप्रेती ,झरना थापा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको थियो ।
पारिवारिक कथामा अब बन्ने फिल्ममा भने फरक कलाकारको अभिनय रहनेछ । फिल्ममा सलोन र शिशिर बाहेक विकास चापागाईँ , सदिक्षा पाण्डे, नरेन्द्र केसी लागयतका कलाकार रहनेछ ।
चैत्र २९, २०७७ आइतवार १३:५७:५६ बजे : प्रकाशित
# हामी तीन भाई
सम्राट्को फिल्म 'लाल मोहन जी' मा विपिन कार्की
काठमाडौं - अभिनेता विपिन कार्कीले फिल्म 'लाल मोहन जी' मा अभिनय गर्ने भएका छन् । सम्राट् बस्नेतको निर्देशनमा बन्ने यस फिल्ममा हालै विपिन अनुबन्धित भएका हुन् । सुगन तण्डुकार निर्माता रहेका यस फिल्म आर. रोसफी फिल्मस्को ब्यानरमा बन्न लागेको हो ।
सस्पेन्स कमेडीमा निर्माण हुने यस फिल्ममा विपिन, अर्पण थापा, कर्मा शाक्य, रोहित रुम्बा, रवीन्द्र झा, सुस्मा कार्की लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ । फिल्मको हिरोइनको भने अहिले खोजी भइरहेको निर्माण टिमले जनाएको छ ।
फिल्मको छायाङकन विदेशमा पनि हुने बताइएको छ । फिल्ममा प्रवेश पौडेलको कथा तथा पटकथा रहेको छ । फिल्म आउँदो वर्षको तिहारमा रिलिज गर्ने तयारी गरिएको छ ।
चैत्र २९, २०७७ आइतवार १२:०१:४५ बजे : प्रकाशित